Taliyihii ciidamada Booliska Galguduud oo lagu dilay Cabudwaaq – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imananaya magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in taliyihii ciidamada Booliska gobolka Galguduud Faarax Warsame Galangooli lagu dhex diley saldhiga booliska magaalada Cabudwaaq.
Dilka Galangooli ayaa la sheegay in uu ka dambeeyay nin ku hubeysan qori AK ah kaasoo gudaha u soo galay saldhiga booliska degmada Cabudwaaq.
Hase yeeshee ninkii ka dambeeyay dilka taliyaha ayaa isagiina is diley kadib markii uu ka baxsaday saldhigga.
Illaa iyo hadda lama oga sababta keentay dilka taliyaha ciidamada booliska Cabudwaaq oo dhacay gelinkii dambe ee maanta,mana jirto cid sheegatay dilka taliyaha.
Dilka sarkaalkan ka tirsan ciidamada Booliska ayaa ah kii 2aad ee ka dhaca dalka Soomaaliya maanta oo kaliya waxaana saaka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari lagu diley taliyihii ciidamada garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso.